लकडाउनका बेला भारतमा घट्यो देशै हल्लिने घट्ना, अब के गर्छन मोदी ? — Sanchar Kendra
लकडाउनका बेला भारतमा घट्यो देशै हल्लिने घट्ना, अब के गर्छन मोदी ?
काठमाडौं । कोरोना महामारीबिरुद्ध जुधिरहेको छिमेकी राष्ट्र भानारालाई अर्को संकट आइलागेको छ । अरब सागरमा देखिएको ‘ताउ ते’ चक्रवातको असर भारतका विभिन्न राज्यमा देखिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटक र गोवालगायत राज्यमा देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा तीव्र गतिको हावासहित भारी वर्षा पनि भइरहेको छ । भारतीय मौसम विभागले चक्रावातको कारण तटीय क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्न सक्ने भन्दै अलर्ट जारी गरेको छ ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले प्रभावित राज्यमा उद्धारको लागि भइरहेको तयारीको समीक्षा गरेका छन् । उनले अस्पतालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमितलाई ध्यानमा राख्दै बिजुली र मेडिकल अक्सिजनजस्ता अत्यावश्यक कुराहरु सञ्चित गरेर राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
समाचारहरुमा बताइएअनुसार भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । चक्रवातको कारण भारतको गुजरातमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान पनि स्थगित भएको छ । केन्द्र सरकारको निर्देशनमा दुई दिनको लागि गुजरातमा कोरोना खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।
भारतको महाराष्ट्रस्थित मुम्बईमा पनि आइतबारदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । वर्षाको कारण मुम्बईको एयरपोर्ट र लिंक ब्रिज पनि बन्द गरिएको छ । यसैबीच भारतको जलसेनालाई उद्धार कार्यमा खटाइएको छ । यस्तै भारतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको औषधि सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्द्धनले संयुक्त रुपमा उक्त औषधिको सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन् । यो औषधि पाउडरको रुपमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । कोरोना विरुद्धको उक्त औषधिको नाम २ डीजी दिइएको छ । यो औषधि सबैभन्दा पहिला दिल्लीको कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिइने बताइएको छ ।
यो औषधि एक सातामा १० हजारको हाराहारीमा उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ । यो औषधि सेवन गरेका ४२ प्रतिशत बिरामीलाई तीन दिनपछि अक्सिजन दिनु नपरेको, दुई दिन अगाडि नै स्वास्थ्य लाभ मिलेको र ६५ वर्षमाथिका बिरामीमा पनि प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिएको छ । यो औषधि पानीमा घोलेर बिहान बेलुका बिरामीलाई दिइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
औषधी भारतको रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठनद्वारा बनाइएको हो । यो औषधीलाई भारतले आपतकालिन प्रयोगको लागि अनुमति दिइसकेको छ । दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धि घट्दो क्रममा छ ।
श’वले भरियो गंगा किनार
उत्तर प्रदेशको गंगा नदीको किनारमा शवहरु भेटिने क्रम अझै पनि जारी रहेको छ । प्रयागराजमा श्रृंगवेरपुर धाम नजिक ठूलो संख्यामा शव गाडिएको छ । स्थिति यस्तो छ कि एक छेउबाट अर्को छेउसम्म मात्र शव मात्र देखिन्छन् । एक किलोमिटर टाढासम्म गाडिएको शवको बीचमा एक मिटरको दुरीसमेत छैन ।
घाटमा पूजा पाठ गर्ने पण्डितका अनुसार पहिले पनि यहाँ ८ देखि १० वटा शव बगेर आउँथे । पछिल्लो एक महिना यो संख्या बढेर दैनिक ६०–७० शव पुगेको छ । कुनै दिन त १ सय वटा शवसम्म भेटिएको छ । एक महिनामा ४ हजारभन्दा बढी शव आइसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरु बेवारिसे शवलाई गाड्ने गरेका छन् । यो पुरानो परम्परा हो । श्रृंंगवेरपुर धाममा प्रयागराजको साथै प्रतापगढ, सुल्तानपुर र फैजाबाद जिल्लामा शवको अन्तिम संस्कार गरिन्छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा श्रृंगवेरपुर घाटमा ठूलो संख्यामा शवहरु आइरहेका छन् । जसले गर्दा दाउराको समेत कमी देखिएको छ । यसले गर्दा काठका ठेकेदारहरूले बढी पैसा पनि असुल्न सुरु गरेका छन् ।
महामारीकाबीच गङ्गा नदी किनारामा श’वको थुप्रो
उत्तर प्रदेशका प्रहरीहरु अहिले गङ्गा नदीका किनारामा बालुवाले अलिअलि छोपछाप पारिएका श’वको अनुसन्धान गर्न खटिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिलाई गङ्गाका तटमा जथाभावी छाडिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरहरू पोस्ट भएपछि प्रहरीले अहिले सक्रियता बढाएको हो ।
जीप र डुङ्गाबाट गस्ती गरिरहेका प्रहरीले लाउड स्पिकरको सहायताले नदीमा जथाभावी शव नफाल्न र नदी किनारामा अव्यवस्थित रुपमा शव नछाड्न आम मानिसहरुलाई अनुरोध गर्न थालेका छन् ।
प्रहरीले लाउड स्पिकरबाट भनिरहेको थियो, “हामी तपाइँलाई अन्तिम संस्कारका लागि मद्दत गर्न यहाँ आएका हौं ।” शुक्रबार, वर्षाले उत्तर प्रदेश राज्यको प्रयागराज शहरको गङ्गा नदी किनारमा बालुवाले छोपछाप पारेका शव बेरिएका कपडा निकालिदिएको थियो ।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारका प्रवक्ता नवनीत सेहगलले आइतबार स्थानीय सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचारको खण्डन गरेका थिए । समाचारमा कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका एक हजारभन्दा बढी शव विगत दुई सातामा ग’ङ्गा नदी किनारामा बे’वारिसे अवस्थामा भेटिएको उल्लेख थियो । तर सेहगलले दाबीका साथ भने, “यी श’व कोभिड–१९ बाट पीडित व्यक्तिका होइनन् ।”
उनले केही मानिसले हिन्दु परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने आफ्ना मृतक परिवारजनको दाहसंस्कार यसपटक विभिन्न कारणले विधिपूर्वक नगरेको बताए । एकजना वरिष्ट प्रहरी अधिकृत के.पी. सिंहले कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएकाहरुको दा’ह’संस्कारका लागि प्रयागराजको नदी किनारामा अलग्ग ठाउँको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कसैलाई पनि नदीको सामुन्ने दा’हसं’स्कार गर्नबाट रोकिएको छ’ उनले भने ।
उनले प्रचार गरिएजस्तो नभई नदी किनारामा सानो संख्यामा श’व भेटिएका बताए, तर उनले वास्तविक संख्या दिन इन्कार गरे । दाहसंस्कारका कार्यमा मद्दत गरिरहेको समाजसेवी संस्था बोन्धु महल समितिका सदस्य रमेशकुमार सिं’हले ग्रामीण इलाकामा मृ’त्यु भएका व्यक्तिको संख्या निकै ठूलो रहेको बताए । उनले दा’ह’संस्कारको काममा बढी खर्च र काठको अभावका कारण धेरै गरिब परिवारले आफ्ना आफन्तजनलाई नदी किनारामा त्यतिकै गाडिदिने गरेको जानकारी दिए ।
हालका दिनहरुमा दा’ह’संस्कारका लागि तीन गुणा मूल्य बढेको छ अर्थात् एक शवको व्यवस्थापनका लागि भारु १५ हजारसम्म पर्न थालेको छ । राज्यका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले गत साता गङ्गा नदीले छेउ लगाएका ७१ शव फेला पारेका थिए । अधिकारीहरुले ती शवको पोस्टमार्टम गरेका थिए तर शवहरु सडिसकेकाले मृत्युको ठोस कारण ठम्याउन सकेका थिएनन् ।
उत्तर प्रदेशकै राजधानी लखनउबाट करिब ४० किलोमिटर दक्षिणको उन्नाउ जिल्लास्थित गङ्गा नदी तटमा बालुवाले छोपेको अवस्थामा गत साता एक दर्जन श’व फेला परेका थिए । जिल्ला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमारले मृत्युको कारण पहिल्याउन अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन् ।
केही हप्तादेखि तिब्र गतिमा फैलिएको कोरोनाभाइरस अहिले केही मत्थर हुन लागेको सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा.भिके पलले बताए । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा विगत २४ घण्टामा भारतमा तीन लाख ११ हजार व्यक्ति कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका उल्लेख छ । यो संख्या अघिल्लो दिनको भन्दा करिब १५ हजारले कमी हो ।
तर मृत्यु दरमा भने कमी आएको छ । विगत २४ घण्टामा भारतमा चार हजार ७७ जनाको कोभिडको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ । योसहित भारतमा कूल मृतकको संख्या दुई लाख ७० हजार २८४ पुगेको छ । कतिपय विज्ञहरुले यो संख्याभन्दा अझ बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै भारतको केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली राज्यमा बन्दाबन्दीको कारण सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सहज बन्दै गएको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आइतबार बताएका छन् । राज्य सरकारले केन्द्रको समन्वयमा लकडाउन पुनः एक हप्ताका लागि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री केजरीवालले लकडाउन थप एक साता बढाउने निर्णय भएको पुष्टि गरे ।
उनका अनुसार लकडाउन पहिले सङ्क्रमण दर ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा यसमा उल्लेख्य कमी आएको छ । आइतबार संघीय मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार दिल्लीको सङ्क्रमण दर १०.४० मा झरेको छ ।
दिल्लीमा जारी लकडाउन सोमबारदेखि थप एक हप्ता अर्थात् मे २४ सम्म लम्ब्याइएको छ । मुख्यमन्त्री केजरीवालले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव भएको भन्दै केन्द्र सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेका छन् । खोपको अभाव नभएमा आगामी तीन महिनाभित्र सबैलाई पहिलो चरणको खोप लगाइसकिने पनि उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले किन मजाकमा उडाए बाइडेन-जोनसनको याे एक तस्बिर ? यस्ताे छ कारण
देखिन थाल्यो कोरोनाको अर्को नयाँ लक्षण, यसो भन्छन विज्ञ
आर्थिक र सैन्य सहकार्यका लागि चीन र इरानबीच सम्झौता
उडेको केहि मिनेटमै जहाज दुर्घटना, १२ जनाको मृत्यु, थप विवरणसहित
भारतमा एकैदिन अहिलेसम्मकै बढि संक्रमितको मृत्यु